तपाईं माथि केही अशुभ हुँदैछ ? यी जनावरहरुले दिन्छन् यस्ता संकेत - Experience Best News from Nepal
तपाईं माथि केही अशुभ हुँदैछ ? यी जनावरहरुले दिन्छन् यस्ता संकेत
परापूर्वक कालदेखि जनावर, पशुपंक्षी लगायतले शुभ र अशुभ कुराको संकेत गर्ने विश्वास हिन्दूधर्मावलम्बिहरुले विशेषरुपमा गर्ने गरेका छन् । कुकुर, विरालो, फ्याउरो, काग लगायत जनावर तथा पशुपंक्षीहरुले पछि हुने कुराको संकेत गरिरहेका हुन्छन् भन्ने मान्यता नेपालमा रहेको छ ।
राउटेहरुले यसरी मनाउदा रहेछन् सुहागरात, थाहा पाउदा सबै चकित !